Indlu entsha yaseFama
Skirling, Scotland, United Kingdom
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguJoyce
Iloji entle ebekwe kwindawo yayo yabucala enemibono ezukileyo macala onke. Ilala ngokukhululekileyo ayi-8 kumagumbi okulala ayi-3 kunye nebhedi yesofa ephindwe kabini kunye nesitovu somthi esivuthayo inika ikhaya elimangalisayo elivela ekhaya kubo bonke abahlobo bakho kunye nosapho. Ibekwe kumda weMida yaseScotland, ungaphantsi kweekhilomitha ezi-2 ukusuka eBiggar apho uya kufumana yonke into oyifunayo ngeholide engalibalekiyo. Zininzi ukuze usapho lulonwabele kubandakanya iimyuziyam, iinqaba, ukukhwela ibhayisekile entabeni kunye negalufa.
Le loji ibanzi inesicwangciso esivulekileyo sendawo yokuhlala, i-snug kunye nekhitshi / indawo yokutyela. Indawo yokuhlala inesitovu samaplanga kwaye ivula iveranda. Kukho igumbi lokuhlambela elisezantsi kunye negumbi lokulala elinamawele. Phezulu kukho igumbi lokulala elilingana nokumkani eline-en-suite kunye nelinye igumbi elinamawele eline-en-suite. Kukho ibhedi yesofa ephindwe kabini kwindawo yokumisa enkulu.
Ikhitshi lixhotyiswe kakuhle kakhulu kwaye zonke ilinen kunye neetawuli zinikezelwe.
Indlu iyonwabela indawo ethe cwaka ethule kwigadi yayo yabucala kunye namasimi ethu asefama kumacala ama-3. Kuqhelekile ukubakho iigusha okanye iinkomo ezitya emasimini ngoko ke siyakucela ukuba ufuye izinja kwisikhokelo kwaye ungangeni emasimini ukuba kukho amatakane okanye iinkomo ezikufutshane.
Ukufikelela okwabelwanayo kwindlu kungokuzinziswa kwefama ephuhlisiweyo ngoko ke nceda uhloniphe imfihlo zabanye abahlali.
IBiggar ingaphantsi kweekhilomitha ezi-2 ukusuka apho uya kufumana yonke into oyifunayo kubandakanya iivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela kunye neevenkile zezipho ezizodwa.
Nangona uziva ngathi ukude kuyo yonke into, i-Edinburgh kunye neGlasgow zifikelelwa kwiyure enye njengamakhaya amaninzi anqabileyo kunye neenqaba kunye neziko lehlabathi lokuhamba ngebhayisekile ezintabeni eGlentress nase-Innerlethen.
Ngelixa ndihlala ndikushiya ukuba ungene ngokwakho, ndihamba ngemoto imizuzu emi-5 kuphela xa ufuna nantoni na.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Skirling